Palestiniàna ilay vehivavy mpampianatra mendrika indrindra, hoy ny Papa François · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2021 8:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Ελληνικά, عربي, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2016)
Hanan Al Hroub, vehivavy palestiniàna voafidy ho ny Mpampianatra Mendrika Indrindra eto amin'izao tontolo izao. (Pikantsary avy amina lahatsary iray)
Vao avy nahazo ny fanosorana azy ho ny Mpampianatra Mendrika Indrindra eto amin'izao tontolo izao ilay vehivavy palestiniàna Hanan Al Hroub. Anaram-boninahitra atolotry ny Fondation Varkey, ilay loka dia ahitàna masombola 1 tapitrisa dolara izay nolazain‘i Hanan Al Hroub fa tiany ho ampiasaina ho amin'ny fisoratana eny amin'ny anjerimanontolo ho an'ireo maniry hanaraka fianarana ho mpampianatra any aoriana, na lahy na vavy.
Ny Papa François no nanambara ny anaran'ilay voafidy, tamin'ny alàlan'ny lahatsary iray nalefa nandritra ny lanonana fanolorana izany tao Dubaï, Emira Arabo Mitambatra :
Misy ampahany iray amin'ny fanabeazana ny ankizy no aompana amin'ny lalao, satria amin'ny alàlan'ny lalao no mifankahazatra ary mianatra ny hafaliana miaina. Tiako ny miarahaba manokana an'ilay vehivavy mpampianatra, Hanan Al Hroub, nahazo ity loka manana ny maha-izy azy ity noho ny lanja nomeny ny toeran'ny lalao ao anatin'ny fanabeazana ny ankizy.
“Hitako ho tena miavaka, ary tsy mbola mino mihitsy aho hoe nanonona ny narako ny Papa. Hoe misy vehivavy palestiniàna iray mitodika miteny amin'izao tontolo izao androany ary tonga amin'ny faratampon'ny fanabeazana azo atao ho ohatra ho an'ireo mpampianatra hafa rehetra manerana ny tany”, hoy ny nambaran-dRtoa Al Hroub tamin'ny Associated Press.
Mafy ny fiainana ao Palestina. Lehibe tany anaty tobin'ireo mpitsoa-ponenana tao Al Dheishe, akaikin'i Betlehema i Hanan Al Hroubn ary ankehitriny mipetraka sy mampianatra ao Al-Bireh, tanàna iray misy mponina 39.000 ao akaikin'i Ramallah renivohitra palestiniàna. Ny Intifada voalohany (1978-1993) no nanapaka ny fianarany teny amin'ny anjerimanontolo. Niaraka tamin'ny karamany nanify dia nanify, 2.500 sekely isambolana ( 587 eo ho eo), mandray anjara amin'ny fikarakaràna ny ankohonany izy no sady mividy ireo fanaka sy fitaovana ilaina ho an'ny efitrano fampianarany.
Hoy izy tamin'ny Guardian :
Maherisetra ny tontolo iainana ivelan'ny efitrano fianarana. Entiko ao anatiny ny fandriampahalemana, firindràna ary fitoniana.
Hazavain'i Al Hroub fa ny fomba fampianarany dia mitsabo ireo ratra amin'ny alàlan'ny fampianarana mifantoka amin'ny lalao ary ny fanamafisana amin'ny fomba miabo dia teraka avy amin'ny zavatra niainany manokana teo anivon'ny fianakaviana. Tsaroany ny ratra anaty niainan'ireo zanany tonga avy any an-tsekoly raha nahita iray tamin'ny fianakaviana maty voatifitry ny bala, ary ny rainy kosa naratra.
[Io zavanisy io dia] nahatohina mafy ireo zanako sy ny tenako. Nanova ny fitondrantena izany, ny maha-ianao anao ary ny fianaran'ireo zanako. Nahatsiaro ho irery aho nitantana ireo zanako namakivaky izany. Tsy nisy mpampianatra na iray aza nanampy anay hanarina indray ny zanakay. Dia niezaka namorona lalao izahay tao an-trano ary [nanasa] ireo ankizy zanaky ny mpiray vodirindrina.
Mianatra miteny ‘Tsia’ manohitra ny herisetra ireo mpianatr'i Hanan Al Hroub, ao anatiny sy ivelan'ny rindrin'ny sekoly. (pikantsary avy amina lahatsary iray.)
Taona voalohany teny amin'ny anjerimanontolo i Al Hroub fony nipoaka ilay intifada. Ankehitriny, mpanoratra ny fomba iray fanabeazana sy boky mitondra ny lohateny hoe “Milalao izahay, Mianatra izahay” izy, ka ao no tantarain'i Al Hroub fa noho ny fahitàna ireo hetsika fanasitranana entin'ny lalao nataony ho an'ny manodidina azy, natodiny ho any amin'ny fampianarana ambaratonga fototra ny fandalinany.
Nanapaka hevitra aho ny hanampy ny ankizy tsirairay nisedra zavatra tahaka izany. Raha misy ankizy tsy miaina mivantana ny fisamborana, ny herisetra, ny fisavàna, ary ireo herisetra rehetra misy ato amin'ny firenenay, dia ny efijerin'ny fahitalavitra sy ny tambajotra sôsialy no ahitan-dry zareo azy, ary mbola misy fiantraikany amin'izy ireo ihany. Voakasika ny fiainan-dry zareo, ny fihetsiny ary dia miova ny fanabeazana azy ireo. Nohalaliniko ireny fihetsika ireny ary narafitro hifanaraka amin'ny tsy fanaovana herisetra ho filamatra.
Ho famintinana dia manamafy izy fa :
“Izahay Palestiniàna dia vahoaka mijaly amin'ny karazan-tsakana sy herisetra amin'ny endriny rehetra terena hiainanay [vokatry ny fibodoana ataon'ny Israeliàna]. Te-hiaina fotsiny am-pilaminana izahay. Tianay mba handany ny fahazazàny ao anaty fandriampahalemana ny taranakay. Teneniko amin'ireo mpampianatra rehetra, Palestiniàna na manerana izao tontolo izao ny hoe: mijery ny maha-olona ny asantsika, mendri-kaja ny tanjony farany. Tsy maintsy ampianarintsika an'ireo ankizintsika fa ny hany fiadiana an-tànantsika dia ny fahalalàna sy ny fanabeazana. Io no hany fitaovana hakàna indray izay nesorina tamintsika”.
Ireo mpankasitraka azy mandrisika an'i Hanan al Hroub tao Ramallah, Palestina. (loharano: Global Teacher Prize)
Tamin'ny fotoana nandehanan'i Hanan Al Hroub ho any Dubaï handray ilay loka, ireo mpankasitraka azy kosa nankahery azy teo amin'ny kianja Al-Manara tao Ramallah. Tao anaty lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe “Firavoravoana tao Palestina,” ny Global Teacher Prize dia namoaka saripika misy ireo vahoaka niandry hahafantatra raha toa ka isan'ireo 10 voafidy sy tonga tamin'ny famaranana izy (tamin'ireo 8.000 voafantina).
Tao amin'ny Twitter, nandefa sarin'ireo sorabaventy avy any Palestina nankalaza ireo zavabitany izy.
supporting me @TeacherPrize#TeachersMatterpic.twitter.com/DlpF1OkgqW
Sarim-panohanana avy amin'ny fireneko
Taorian'ny nanambaràna ny loka nomena an'i Rtoa Al Hroub, naboraky ny Associated Press fa i Omar Al Hroub, vadiny, dia namita sazy fampidirana am-ponja nandritra ny 10 taona tany amin'ny fonja israeliàna iray noho ny nandraisany anjara tamina fanafihana iray tamin'ny 1980 izay nahafatesana Israeliàna enina. Fanehoankevitry ny Orina Varkey : “Fotokevitray ny tsy hijery afa-tsy ny kalitao, ny zavabita ary ny fitondrantenan'ireo mpifaninana”.
Tamin'ny fombany manokana, arovan'i Hanan Al Hroubi fatratra nandritra ny 35 taona ny tsy fanaovana herisetra, amin'ny alàlan'ny fitarihana hankany amin'ny làlan'ny fandriampahalemana ireo andian-taranaka misy ny ankizy.
Nilaza i Mère Térésa fa “matoa tsy mandry fahalemana isika, dia satria adinontsika fa mifampiankina isika rehetra”. Fehezanteny iray noraisin'i Hanan Al Hroub ho azy tenany:
“Ho very ireo ankizy izay nijaly niaritra herisetra raha tsy omena azy ny fanampiana sy ny tohana ilain'izy ireo. Hatrany am-boalohany, nataoko izay hahazoana antoka hoe takatr'ireo ankizy fa fianakaviana iray izahay rehefa ao an'efitrano sekoly : mpirahalahy mian'ala, mifampiankina”.
Te-hisaotra vehivavy mpampianatra iray ve ianareo ? Andrasan'i Al Hroub sy ny Orina Varkey ny bitsika avy aminareo, eo ambanin'ny tenifototra #TeachersMatter (misy lanjany ireo mpampianatra).
Fanampim-panazavana misimisy kokoa momba ireo tafakatra tamin'ny famaranana Loka 2016 erantany ho an'ny fampianarana.